Lalana Tsarasaotra-Ivato : Efa azo hifamezivezena -
AccueilSongandinaLalana Tsarasaotra-Ivato : Efa azo hifamezivezena
Nisokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly ny lalana mampitohy an’i Tsarasaotra amin’ny kaomina Ivato. Manomboka izao, afaka handehanan’ny rehetra amin’izay ity lalana ity, izay mirefy 11 km. Lalana natao hanamaivanana ny fitohanana misy amin’ny lalana Ambohimanarina, Ambohibao, Talatamaty. Raha ny nambara omaly, mbola tsy vita tanteraka ny lalana fa fanokafana fotsiny ihany no natao mba ahafahan’ny olona rehetra mifamezivezy sy hisitraka izany. Fa mitohy kosa ny asa, ary mila mitandrina ny mpandeha amin’iny lalana vaovao iny mba hieren-doza. Efa nisy mihitsy ny baiko nomena ireo mpitandro filaminana mba hijery sy hanara-maso ary hanasazy ireo minia mandika ny toromarika amin’iny lalana iny. Ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny fotodrafitrasa kosa no mandamina ireo kihon-dalana izay hivoahan’ny olona amin’ny tanàna, toa ny fiampitan’ny ankizy. Amin’ny maha lalana mampifandray an’Ivato azy ity dia anisan’ny misitraka izany lalam-baovao izany ny kaominin’Ivato. Manoloana izay, nankasitraka ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana ny ben’ny tanàn’Ivato. “Maniry izahay mba hitondra soa ho an’ny vahoaka sy ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina, indrindra ny kaominin’Ivato ny fahavitan’ny lalana, satria ho afaka amin’ny fitohanana izahay”, hoy ny ben’ny tanànan’Ivato, Randrianarisoa Penjy.
Marihina fa mbola betsaka ny zavatra atao amin’ity lalàna ity, toa ny fametrahana ny andrin-jiro sy ny “casseur de vitesse”. Raha tsiahivana dia nanomboka ny volana febroary 2016 ny asa raha niato kosa izany avy eo ny volana oktobra 2016, noho ny fandraisan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia tamin’ny taona 2016 io ihany. Teo koa ny antony ara-teknika noho io tany io nototofana. Ny faran’ny volana jona lasa teo indray vao niverina ny fanamboarana. Nohatevenina ny haavon’ny tara mba ho mafy sy mateza ny lalàna, izay manaraka ny fenitra Frantsay raha toa ka iray sosona ihany izany tamin’ny voalohany. Mirefy 11 km ity lalàna ity, mirefy 12 metatra ny sakany, ary mitentina 184 izay famatsiam-bola avy amin’ny banky Sinoa Exim Bank. Tombanana ho vita amin’ny volana jona 2019 kosa ny lalàna eny Ambohitrimanjaka mivoaka an’Ambohidratrimo. Hamaha betsaka ny olan’ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ny manodidina azy ny fahavitan’ireto lalana manivaka ireto.